Addi Bilisummaa Oromoo Kora Sabaa Finfinneetti gaggeeffate. – Oromedia
Home » Oduu » Xiinxala » Addi Bilisummaa Oromoo Kora Sabaa Finfinneetti gaggeeffate.
(Oromedia, 4 Adoolessa 2019) Addi Bilisummaa Oromoo waggoota 43 booda yeroo duraatiif Magaalaa Finfinnee keessatti Kora Sabaa magaalaa Finfinneetti Waxabajjii 28, 2019 gaggeeffate.
Kora Sabaa ABO kana irratti bakka bu’ootni miseensota ABO Godinaalee Oromiyaa fi Mootummoota Naannoolee adda addaa irraa walitti dhufan hirmaataniiru.
Korri kun Waajjira Muummicha Adda Bilisummaa Oromoo kan Gullalleetti argamu keessatti lafa bakka bu’aan Boordii Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaa argametti gaggeeffame.
ABOn Korricha kan gaggeeffate ulaagaa mootummaan boordii filannootti galmeessuuf kaawwate guutuuf ta’uun beekameera.
Akkanaan dhaabichi ulaagaa mootummaan barbaadu hunda guutuun Boordii filannoo biyyoolessaaf bakka bakka bu’aan Boordii filannoo biyyoolessaa obbo Geetaachoo Rabbirraa Baqqaanaa jirutti gaggeessuun Hoggantoota dhaabicha gaggeessan filateera.
Kora kana irratti ABOn Miseensota shanee Gumii saddet HD fi Itti aanaa HD dabalatee akkasumas Miseensota Gumii sabaa 40 filate. Namootni 48 filaman kun lammummaa biyya alaa kanneen hin qabne ta’uun beekameera.
Kora Sabaa kana irratti miseensotni 305 hirmaataniiru.
ABOn akka ibsetti, Korichi erga bara 1976 Korri Bu’uuressaa ABO Magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffameen asitti yeroo duraatiif kan gaggeeffamee dha.
Waxabajjii 28, bara 2019 kan gaggeeffame Korri kun Murtii fi Kutannoolee armaan gadii dabarfatee ka’e.
1. Sagantaa Siyaasaa fi Heera ABO irrati marii bal’aa gaggeessinee wayyeessa haala keessa jiramu wajjin deemu itti goonee raggaasifannee jirra.
2.Hooggana ABO kan hanga Kora itti aanuutti qabsoo karaa nagaa fi dimokiraasii qindeessuu fi to’atu filannee jirra.
3. Hanga Kora itti aanuutti dhimmoota seera/sirnaa fi naamusaa, akkasumas, qabeenya Dhaaba kanaa kan to’atu Koree Naamusaa fi Toohannoos filannee jirra.
4. Qabsoon karaa nagaa fi dimokiraasii akka milkaawuuf, Dhaabota Ummattoota hundaa waliin hariiroo qabsoo Dhaabni keenya qabu dinqisiifachaa, kun daran cimee akka itti fufuu qabu murteessine.
5. Waliigaltee Mootummaa Itoophiyaa waliin goone itti cichuudhaan karaa nagaa fi dimokiraasii Mirgi Hiree Murteeffannaa fi dimokiraasii Ummata Oromoo fi Ummattoota hundaa akka mirkanaawuuf fi nageenyi waaraanis akka argamuuf cimsinee hojjechuuf murteeffannee jirra.
6. Wareegama Ummatni keenya baasaa turee fi jirutti firii gochuuf har’as wareegama qabsoon karaa nagaa nu gaafatu hunda baasnee galma keenya dhaqqabuudhaan nagaa waaraa biyya kana keessatti fiduuf waadaa keenya haaromsanne.
7. Wal-dhabbii siyaasaa biyya kana keessa jiruuf karaa nagaa fi dimokiraasii dhugaatiin yoo ta’e malee afaan qawweetiin furmaatni waaraan argamuu waan hin dandeenyeef, humnootni siyaasaa hundi qabsoo karaa nagaa fi dimokiraasii gamtaadhaan daran jajjabeessuu akka qaban yaamicha qabsoo dabarsina.
Odeessi nu gahe akka ibsutti, Koricha fashaleessuuf shiiri hedduu dalagamaa ture. Haata’uutii, ABOn malaa fi kutannoodhaan akka keessa darbe odeessi nu gahe kun saaxileera.
Odeessa dabalataa toora kana irraa dubbisaa http://www.oromedia.net/siyaasaa/torban-dabarsine-keessa-shira-xaxames-addi-bilisummaa-oromoo-injifannoon-goolabe/
Korri seena-qabeessi kun Kora Addaa ABO kan Dhaabicha Boordii Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaatti galmeessuu akeekkate dha.
Previous: Reminding Statement to the Kenya government
Next: Hojiilee Shanan Gannaa